Interview with Sakhorn Boongullaya, head of WFP field office in Kachin
First of all, we’re focused on our school meals programme. Every day we’re providing 40,000 girls and boys enrolled in primary schools in Kachin with nutritious midday snacks that help them learn more and better prepare for life. WFP supplies the biscuits to the Ministry of Education which distributes them to schools. Currently, we’re reaching 75 percent of all primary school students.
The other focus of our operation is the provision of the basic food assistance to internally displaced persons (IDPs) who fled conflicts in 2011 and later. We’re currently assisting 46,000 people in 100 camps in government-controlled areas (the United Nations has not had access to non-government-controlled areas since mid-2016). In the beginning, we were providing in-kind food assistance to them, such as rice, beans, oil and salt. Since January 2016, we have shifted to cash transfers.
Many people have been displaced for six years and have found some sort of partial livelihood. To avoid dependency and to enhance their dignity and freedom of choices WFP shifted from in-kind assistance to cash transfers. With agreement among the IDPs themselves, WFP together with partners introduced the prioritization categories whereby the most vulnerable IDPs receive 100 percent assistance and the less vulnerable IDPs receive 70 percent of the assistance. It wasasurprise that the communities decided that the most vulnerable category comprises 16 percent and the remaining 84 percent fall under the less vulnerable group. Our cash assistance varies from township to township due to market prices and market situation. The value ranges from MMK 15,000-22,000 (US$11-16) per person per month for the most vulnerable and MMK 11,000-16,000 (US$ 8-12) per person per month for the less vulnerable.
Can you explain how is financial assistance distributed?
Traditionally, each recipient receives financial aid as cash in an envelope from our non-governmental organization (NGO) partners World Vision and Karuna Mission Social Solidarity (KMSS). However, we’re moving towardamobile money system, or e-wallet. Last year, we began to distribute cash through mobile money network to 1,400 people in six pilot camps in Myitkyina and Weingmaw Townships of Kachin State. The way it works is that we electronically credit the mobile money to the account of each head of household. The recipients then receive an SMS notification from WFP which they use to withdraw money from the nearest agent shops or agent ataconvenience store. The pilot project has been tremendously successful. Over 80 percent of the participants have preferred the e-wallet over the envelope. It’s faster, safer and more convenient.
Our ambition is to register all IDPs into SCOPE system, WFP beneficiary database, and provide our assistance via e-wallet. This isamajor challenge given we operate in an environment where fighting still occurs. Our second ambition is to use our mobile account asaplatform to provide services of cash transfer to other clusters; i.e. Water, Sanitation and Hygiene (WASH), Shelter, Livelihoods, etc.
We are in the process of mapping out all livelihoods activities undertaken in Kachin State by national and international organizations. Detailed mapping will allow us to prevent geographic concentrations of activities and it will enable humanitarian and development actors to expand their projects more evenly across Kachin State so that aid can reach as many people as possible.
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလသမဂ္ဂ - ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) ၏ ပံပိုးကူညီမှုဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကလေး ၄၀၀၀၀ တို့သည် စာသင်ခန်းထဲတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလာဒ်များ ရရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ WFP နယ်မြေခံရုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Sakhorn Boongullaya နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
လက်ရှိအချိန်မှာ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဘာတွေကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်နေပါသလဲ ။
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စာသင်ကျောင်း အဟာရကျွေးမွေးမှုအစီအစဉ်ကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ၄၀၀၀၀ ကို အဟာရပြည့်စုံတဲ့ နေ့လည်စာ မုန့်ပဲသရေစာတွေကို ကျွေးမွေးပါတယ်၊ ဒီလိုကျွေး မွေးတဲ့အတွက် သူတို့လေးတွေရဲ့ ပညာသင်ယူရေးမှာ အထောက်အကူပြုသလို၊ သူ့တို့ရဲ့ဘ၀တွေကိုလည်း ပိုမို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ WFP က ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဘီစကစ်တွေ ပေးအပ်ပြီး၊ အဲ့ဒါတွေကိုစာသင်ကျောင်းတွေကို ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မူလတန်းကျောင်းသူ/သားအားလုံးရဲ့ ၇၅% ထိပေးဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ နောက်ထပ်အလေးထားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နဲ့ အဲ့ဒိနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့် ခွာနေထိုင်ကြရသူတွေကို အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာတွေ ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေဒေသတွေမှာရှိတဲ့ စခန်း ၁၀၀ လောက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူပေါင်း ၄၆၀၀၀ကိုအကူအညီတွေ ပေး နေပါတယ် (ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကစပြီး အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ မရှိတဲ့ နယ်မြေဒေသတွေကို သွားရောက်ခွင့် မရရှိခဲ့ပါ။) ကနဦးမှာတော့ ဆန်၊ ပဲ၊ ဆီ နဲ့ ဆား အစရှိတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ ပံ့ပိုးမှုတွေကို သူတို့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလလောက်ကစပြီးတော့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြောင်းလဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
လူတွေတော်တော်များများက နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့တာ ၆ နှစ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအချို့ တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့မှီခိုမှုကိုရှောင်ရှားဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ WFP က ပစ္စည်းရိက္ခာထောက်ပံ့မှုကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နေရပ်စွန့်ခွာသူများကြား သဘောတူညီချက်မှုဖြင့် WFP က မိတ်ဖက်များနဲ့အတူ ဦးစားပေးအမျိုးအစားများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ ထိခိုက်ခံစားလွယ်ဆုံး IDP တွေအနေနဲ့ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းအကူအညီအထောက်အပံ့တွေရရှိခဲ့ပြီး၊ ထိခိုက်ခံစားရမှုနည်းပါးတဲ့ IDPတွေ အနေနဲ့ကတော့ အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုက ထိခိုက်ခံစားရမှုအများဆုံးအမျိုးအစားမှာ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး၊ ကျန်တဲ့ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းက ထိခိုက်ခံစားရမှု နည်းပါးတဲ့ အုပ်စုထဲမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ရပ်ရွာလူထုက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး နဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့တွေက တစ်မြို့နယ်နဲ့ တစ်မြို့နယ် ကွာခြားသွားပါတယ်။ တန်ဖိုးအနေနဲ့ကြည့်ရင် ထိခိုက်ခံစားရဆုံးသူများအတွက် တစ်လမှာ လူတစ်ဦးကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅၀၀၀ ကနေ ၂၂၀၀၀ ကြား (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ နှင့် ၁၆ ကြား) ရရှိပြီး ထိခိုက်ခံစားရမှုနည်းပါးသူများအတွက်ကတော့ တစ်လမှာ လူတစ်ဦးကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၁၀၀၀ နှင့် ၁၆၀၀၀ ကြား (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ နှင့် ၁၂ ကြား) ရရှိပါတယ်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေကို ဘယ်လို ဖြန့်ဝေပေးတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြနိုင်မလား။
အစဉ်အလာအရတော့ လက်ခံရရှိသူတစ်ဦးစီဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ World Vision နဲ့ Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) တို့ထံမှ စာအိပ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ ငွေသား အကူအညီတွေကို ရရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်းငွေကြေးစနစ် သို့မဟုတ် e-wallet လို့ခေါ်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကျွန်တော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မြစ်ကြီးနားနဲ့ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ရှေ့ပြေးစမ်းသပ် စခန်း ၆ ခုမှာ လူပေါင်း ၁၄၀၀ ကို မိုဘိုင်းငွေကြေးကွန်ရက်ကနေတစ်ဆင့် ငွေကြေး တွေကို စတင်ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ အိမ်ထောင်စုအကြီးအကဲတစ်ဦးစီရဲ့ငွေစာရင်း ထဲကို မိုဘိုင်းငွေကြေးများကို အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းစနစ်နဲ့ ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေလွှဲလိုက်ပြီးတာနဲ့ လက်ခံရရှိသူတွေဟာ WFP ထံမှ SMS အကြောင်းကြားစာ ရရှိပါတယ်။ အဲ့ဒိအကြောင်းကြားစာကိုပြပြီး သူတို့ ဟာ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ အေးဂျင့်ဆိုင်တွေ ဒါမှမဟုတ် convenience store ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ အေးဂျင့်တွေထံမှာ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်စီမံကိန်းဟာ အလွန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သော ငွေလက်ခံရရှိသူတွေဟာ စာအိပ်နဲ့ပေးတာထက်စာရင် e-wallet ပေးတာကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒိစနစ် က ပိုမြန်တယ်၊ ပိုပြီး လုံခြုံတယ်၊ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။
ယခုနှစ်အတွက် လူကြီးမင်းရဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေက ဘာတွေပါလဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်က IDP တွေအားလုံးကို SCOPE system နဲ့ WFP အကျိုးခံစားရသူများဆိုင်ရာ ဒေတာဘေ့စ် တွေထဲမှာ မှတ်ပုံတင်သွင်းရန်နဲ့ e-wallet ကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောက်အပံ့တွေကို ပေးအပ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နေရာတွေ မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒုတိယရည်မှန်းချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းငွေစာရင်းကို Water, Sanitation and Hygiene (WASH), Shelter, Livelihoods စတဲ့ အခြားသော အစုအဖွဲ့တွေကို ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုလည်း လေ့လာ မှတ်တမ်းတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့ အ ချက်အလက်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို နေရာဒေသတစ်ခုတည်းမှာ လုပ်ငန်းများကို စုပြုံလုပ်ဆောင်တာမျိုး မရှိ အောင် တားဆီးပေးမှာဖြစ်သလို၊ လူသားချင်းစာနာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်နေသူတွေကို သူတို့ရဲ့ စီမံကိန်း တွေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ညီညီမျှမျှ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ဖြင့် ပြည်သူများထံ များနိုင်သမျှ များများ ရောက်ရှိနိုင်စေ ရန် အထောက်အကူ ပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။